Dhalaan Loo Magacaabay Gudoomiye Dagme Oo Ka Baqay Xilka Loo Igamaday Dedegna Isku Casilay – Heemaal News Network
March 18, 2018 Farsamada, Soomaaliya
Faysal Cabdulaahi Cumar oo wareysi siiyey warbaahinta ayaa sheegay in lamagacaabay isaga oo aan ogayn, mar qur ahna ka warhelay in xil loo magacaabay, wuxuuna meesha ka saaray in lagu war giliyay in xilkaas loo magacaabayo, wuxuu sidoo kale sheegay in uu aad ula yaabay sida fudud ee loogu magacaabay xilka Gudoomiye ku xigeenka dhanka arimaha Bulshada ee Degmada Gamboole ee G.SH/dhexe wuxuu kalo uu sheegay in xilalka hadda loo maro dhibaato badan oo lagu bixiyo lacago badan, laakiin isaga aanu ogayn waxa sababay in xilkaas loo magacaabo.
Alshabaab Oo Hub Kala Soo Dagtay Dagaanka Xarardheere Ee Gobolka Mudug
Daawo Farqiga kala Fog Ee U Dhaxeeya Xarumaha ay ku Shiraan Wasiirada Jubbaland iyo kuwa Hirshabelle.(Sawiro)
Maamulka Hirshabelle oo kamid ah maamulada dalka ka jira ayaa si weyn loogu dhaliilay in uu ka mashquulay howlihii loo igmadauy sida dhinaca amaanka , horumarka iyo dhinacyo kale oo badan oo muhiim u ah […]
Akhriso Oo Dhagayso Liiska Golaha Wasiirada Dowlad Goboleedka Hirshabelle Oo la Magacabay.
November 29, 2017 Soomaaliya
Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa goor dhow ku dhawaaqay gole wasiir oo ka kooban 57 xubnood. Golaha wasiirada ayaa waxa ay isugu jiraan qaar hore uga tirsanaa dowladii Cali Cabdulaahi Cosoble iyo […]
Xildhibaanno kasoo Horjeestay Habka loo Magacaabay Golaha Wasiiradda Hirshabeelle.
Qaar ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Maamulka Hirshabeelle ayaa waxa ay ka soo horjeesteen magacaabistii Golaha Wasiirada maamulka Hirshabeelle ee shalay uu sameeyay Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Xildhibaanada ayaa waxaa ay sheegeen magacaabistii uu […]